Girls uthande ukushintsha futhi kusimangaze ekuzungezile. A new ikhabethe, izimonyo, kwekhanda - ngezinye izikhathi lokhu kubonakala ngokwanele, futhi wanquma ukuba ngokuphelele ukushintsha wakhe umbala izinwele. ukukhanya Disguise emthunzini amnyama - elula, kodwa isifiso, uma ufuna ezikhanyisa futhi babe kusuka Brunette ukuba blonde?
Uma intombazane efuna ukuthola indlela ukudaya izinwele zakhe kusukela kumnyama kube umbala okhanyayo, kubalulekile ukuqonda ukuthi lokhu ngeke kwenzeke konke ngesikhathi esisodwa. Ukucacisa - kunemidanti kubenzima futhi kuthatha isikhathi. Ungakwazi Ngokuqinisekile uzame ukuze kungabonakali ngokushesha, kodwa kuyafaneleka ukucabangela ukuthi lokhu kuzoba ukucindezeleka omkhulu izinwele. Ngaphezu kwalokho, ngemva izenzo ezinjalo zingaholela ekuphathekeni ezinde ukuze, uzama ukuphulukisa sivala lilimele. Inani eliyisilinganiso nezinqubo repainting umthunzi okokukhanyisa - 3-5. Inqubo ngokwayo kungcono ishiyelwe wezinwele ezinhle, kunokuba ukuchitha onke isenzo ekhaya.
Uma intombazane ifuna indlela yokudaya izinwele zakhe kusukela kumnyama kube umbala okhanyayo, kubalulekile ukwazi ukuthi namuhla kukhona izinqubo ezimbili eziyinhloko: siphungule futhi repainting. Ngamunye wabo kunezinzuzo zako kanye anga noma angeke abe kumuntu othize.
Indlela yokuqala ukuba repaint izinwele kusukela kumnyama kube umbala okhanyayo, esetshenziswa abalungisa izinwele abafanelekayo - siphungule kancane kancane. Le ndlela ubhekwa kuhle ezinzima, amantombazane kanye izinwele ethambile futhi mncane ke sinconywa kakhulu. essence yayo itholakala iqiniso ukuthi ambalwa izigaba izinyanga mayelana ezimbalwa (inguqulo mnene), intombazane ngeke agqoke vysvetlitel izinwele emva izinwele ukupenda phezu umbala oyifunayo. Uma usebenzisa indlela enjalo kungcono ukuthatha uhlobo engashiyi izindlela, indlela kuphela ungakwazi ukugcina akhanye futhi impilo izinwele. Uma intombazane efuna ukuba inqubo kwenziwe ekhaya futhi ngifuna kuka ekhanyisa izinwele ekhanda lakho, udinga ukwazi ukuthi kungcono ukusebenzisa izimonyo yesimanje kuphela. Sebenzisa i-hydrogen peroxide, njengoba senzile ogogo bethu, akudingekile - ukuze ukwazi unomphela izinwele zakho.
Uma intombazane efuna kufihlwe umbala umbala lula, kungenzeka ukuthi bancome repainting kancane kancane. Ingqikithi yalo inqubo wukuthi ngamunye isikhathi okwalandela client of a salon ubuhle uzobe ngesineke umthunzi ukuxegiselwa uze uthole umbala oyifunayo. Ngokwesilinganiso, inqubo enjalo kuthatha amaseshini mayelana 5. Inzuzo le ndlela ukuthi, ngokungafani siphungule, Ungenza ngokwakho ekhaya, ikakhulukazi ngoba namuhla kukhona okukhulu, okulula ukusetshenziswa izinwele wemvelo - mousse.
Uma intombazane ephethe izinwele ogulayo, ziyaqothuka noma ezomile ufuna ngendlela yokudaya izinwele zakhe kusukela kumnyama kube umbala okhanyayo, into kuphela ukuthi batusa onguchwepheshe omuhle - balinde kuze izinwele ayibi emuva. Kungenjalo, ungazama izinwele zabo, zama haircuts iDemo.
Uma unquma ukuya emuva umbala wakho, ochwepheshe ungase wazi ukusizakala removers yesimanje upende okuyizinto kakhulu ukugeza imibala yokufakelwa. Yini embi ngalo le ndlela ukuthi ngezinye izikhathi kungase wageza zombala yemvelo, okwenza imicu ngazinye izinwele kungekho nto enemibala emihle futhi ezingaphili. Inzuzo le ndlela kungenzeka ukusetshenziswa esizimele lezo zimali ekhaya.
Haircuts for round ubuso kwabesifazane okhuluphele (isithombe)